सधैं आधा लम्बाइ "टोयोटा को केमरी" अगाडि हुनेछ! एकमत मालिक समीक्षा
सम्झनुहोस्, "जन्म" "टोयोटा को केमरी" को रूपमा। Bundling, शायद पनि आज आधुनिक स्वतः कम्पनीहरु, द्वारा प्रस्तावित मानक यस्तो बोल्ड प्रयोग को पुनरावृत्ति preclude। केवल यो लागू गर्न सक्षम व्यवस्थापनमा - व्यापार र मध्यम वर्ग पालकी पूर्ण गति बीच बजार आला भर्न निर्णय। एक मिश्रित एक वास्तविक व्यावसायिक डिजाइनर गर्न मूल्य अंक को एक लोकतान्त्रिक खण्ड मा फैशन पालकी र कूप गति गुणहरू छैन। तर "टोयोटा" यो सक्षम छ कि व्यवहार मा साबित भएको छ। जापानी अटो विशाल छ वर्ष पहिले, दिग्गज "जनरल मोटर्स" को उत्पादन को मामला मा "बाटोमा हरायो।"
अब, "प्रणाली मा" यो सातौं पुस्ता छ हुन्छ जब, "टोयोटा को केमरी" को प्रभावकारिता हेर्न। सुविधाहरू कार गतिशील प्रगति अपडेट गरियो। हाल, मोडेल को उत्पादन पाठ्यक्रम अष्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस मा स्थापित र, जापान।
यो अघिल्लो चरणमा जापान को सबै भन्दा ठूलो सवारीसाधान निगम को डिजाइनर कार को सर्वोत्कृष्ट आयाम "गणना" कि जस्तो देखिन्छ। यसको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ 482,5 सेमी र 182,5 सेमी, 148 सेमी को मान मा स्थिर, अपरिवर्तित रह्यो। तर, समग्र डिजाइन एकदम अद्यावधिक गरिएको छ। को "टोयोटा" को नयाँ सामान्य व्यापार वर्ग सुविधाहरू दुनिया स्वतः बजार को एक अनुभूति भयो। Autoexpert, विशेष, कि सायद त्यसपछि अन्दाज लगाउनु गर्न पनि "मर्सिडीज", "नरम" आफ्नो क्लासिक अवधारणा।
मिसिन को बाहिरी मा राम्ररी हेर। अद्यावधिक गाडीको अगाडीको शिशा ग्लाजिंग, स्टाइलिश जंगला पूर्ण बढेको ब्लक हीरा आकारको लम्बी हेडलाइट्स मा खोल्दै। हुड संरचना aerodynamic Embossing पखेटा र पक्ष परिवर्तन "टोयोटा को केमरी।" समीक्षा मालिक वृद्धि भित्री मात्रा देखाउँछन्। को रियर ढोका को आकार र डिजाइन परिवर्तन, यो थप कुशल र Ergonomic भएको छ। मोडेल को स्थिरता wheelbases देखाउनुहुन्छ -। 277,5 सेमी कुनै परिवर्तन एकदम स्वीकार्य ट्रंक मात्रा 506 एल थियो। (483 लिटर, खातामा अतिरिक्त स्थापना लिइरहेको)।
Avtokorporatsiya "टोयोटा" इन्जिन को तीन प्रकार यो मोडेल पोख्त हुन्छौं। पहिलो उनको अघिल्लो इन्जिन, छैटौं मोडेल को लाइन मा सबै भन्दा राम्रो रूपमा "पाएको" गए। यो चार-सिलेंडर VVT-म इन्जिन क्षमता 2.0 shestnadtsatiklapanny। शक्ति 148 HP यो को 190 मी / घन्टा अधिकतम गति पुग्न गर्न अनुमति दिन्छ। गतिशील विशेषताहरु पालकी सुरु गरेपछि 12.5 सेकेन्ड पछि गति नाप्ने यन्त्र 100 मी / घन्टा मा मार्क मिलाएका छौं। यो कन्फिगरेसन "टोयोटा को केमरी" मा - यो एक 4-गति स्वचालित प्रसारण (2.923 एक गियर अनुपात भइरहेको) यसको एकत्रीकरण कल्पित। 8.3 लिटर - देश मा 11.4 लिटर - - शहर मा संयुक्त 6.5 लिटर,: समीक्षा मालिक प्रति 100 किलोमिटर यसको अर्थव्यवस्था गर्न सकारात्मक सापेक्ष छन्।
जापानी दोस्रो घटक "फलाम pacer" नयाँ 4-प्रबलित एक नवीन वाल्व सिस्टम संग 2.5 लिटर को सिलेंडर इन्जिन विस्थापन implies। को "फलाम हृदय" को निस्कनुहोस् उत्तेजित गर्दछ शक्ति 181 HP अधिकतम गति, क्रमशः, इष्टतम वृद्धि - 210 मी / घन्टा। नयाँ इन्जिन मद्दत गर्छ एकदम वृद्धि भएको "टोयोटा को केमरी" को गतिशीलता,9को लागि "एक सय लिन" पहिले नै। यो मोडेल को मालिक को समीक्षा दोहोरो VVT-म, ग्याँस रिकभरी अनुकूलन एक सिस्टम गर्न वृद्धि इन्धन अर्थव्यवस्था धन्यवाद झल्काउँछ। शहरमा इन्धन खपत, क्रमशः संयोजन मा शहर, छ - 11 एल; 5.9 लिटर; 7.8 लिटर। मोटर अनुसार, समग्र 3,815 को एक गियर अनुपात 6-गति स्वचालित प्रसारण संचालित।
आधुनिक मोटर वाहन उद्योग को विकास यसको इन्जिन प्रमुख निगमों को एक गतिशील र निरन्तर सुधार आवश्यक छ। हाल, निर्माता अग्रणी सबै भन्दा राम्रो मोटर्स sedans पहिले नै विदेश 200 लिटर सरेको छ। एक। एक अपवाद छैन र "टोयोटा।" माथि 249 HP गर्न - को छ-सिलिन्डर इन्जिनको विस्थापन 3.5 नवीनता एकदम क्षमता बढेको छ 210 एल / s, "टोयोटा को केमरी" को लुकेका संभावित प्रदर्शन गर्छ जो - यो मामला मा डिजाइनर अघिल्लो मोडेल जस्तै स्तरमा यसलाई सीमित द्वारा अधिकतम गति बल छैन फैसला गरेको छ कि महत्वपूर्ण छ। यसको गतिशीलता सन्दर्भमा मालिकको समीक्षा unambiguous छन् - महत्वपूर्ण वृद्धि। "सयौं" गर्न अघि बढाउने बस 7.1 सेकेन्डमा - एक विशाल व्यापार-वर्ग पालकी लागि, सुशील छ पाठ्यक्रम, दर! तार्किक, कि कारण लाभकारी को प्रमुख संकेतक को वृद्धि शक्ति, "एक कदम पछाडि", तर व्यावहारिक सीमा भित्र। प्रति शहर मा 100 मी पेट्रोल को मोडेल उपभोग, राजमार्ग र संयुक्त, क्रमशः, 13.2 लिटर,7लिटर, 9.3 लिटर को स्तर मा।
अमेरिकी - लेख अन्तिम, यो सबै भन्दा ठूलो मोटर वाहन बजार मा बिक्री मा उछाल उल्लेख छैन अन्याय हुनेछ। यो यसको बिक्री को रूस मा प्रभावकारिता -। 2012 को लागि7हजार एकाइहरु बिक्री को गतिशीलता, "टोयोटा को केमरी" वृद्धि छ कि विचारणीय छ।
साँचो आर्य "वोक्सवैगन गोल्फ प्लस।" समीक्षा मालिक
कार धुने लागि सक्रिय फोम दर्जा। समीक्षा, निर्देशन, संरचना: कार Washes "Karcher" को लागि फोम। फोम कार आफ्नो हात धुन
नाम, गुण र मूल को Potap अर्थ
चलचित्र "के भेगासका हुन्छ": अभिनेता र भूमिकाको, कथा
अर्मेनियाई गटा एक नुस्खा हो। कसरी एक गोल अर्मेनियाई गेट कुकिन्छ
रातो मूल को प्रयोग
गृह क्यान्सर: सर्पको लागि सूप सिजन